မျက်လုံးပုံစံကို ပြန်လည်နုပျိုစေသည် - အိမ်လုပ်မျက်နှာဖုံးများ | Bezzia
မျက်လုံးကို နုပျိုစေသော မျက်နှာဖုံးများ
Susana godoy | 12/01/2022 12:00 | လှပမှု
မျက်လုံးပုံစံသည် အနူးညံ့ဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။အရေပြားက ပါးလွှာတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့မျက်နှာထက် ပိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း အမှောင်စက်ဝိုင်းများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပေါ်လာနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင် အခြေချနေထိုင်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကို မွဲခြောက်သွားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်နှာဖုံးများကို အစီအရီများဖြင့် ပြန်လည်နုပျိုစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်လုပ်အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းဖြင့် အသားအရေအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ် ရေဓာတ်ကောင်းစေတဲ့အပြင် ဗီတာမင် E ကိုလည်း လောင်းပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အခြေခံအဆင့်အချို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သင့်မျက်နှာကို ပြန်လည်နုပျိုစေဖို့အတွက် Mask ပုံစံနဲ့ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအရာအားလုံးကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။
1 မျက်လုံးကို နုပျိုစေဖို့ ကြက်ဥအဖြူ
2 Antioxidant Mask ကို လောင်းပါ။
3 ထောပတ်သီးကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။
မျက်လုံးကို နုပျိုစေဖို့ ကြက်ဥအဖြူ
ဗီတာမင် E လို့ပြောရင် ကြက်ဥအဖြူမှာ ဒီဗီတာမင်တွေ ပါတာမို့ လက်ထဲမှာလည်း ကောင်းပါတယ်။ သူ့မှာ Group B ပါတာကို မမေ့ဘဲနဲ့ အသားအရေကို အမြဲတမ်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုသရမယ့် နေရာကို လိမ်းပေးရပါမယ် အဲ့ဒါကြောင့် ခြောက်သွားတဲ့အထိ ငြိမ်ခံထားရတယ်။ အသားအရေကို လိုအပ်သလို တင်းရင်းအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။. ပြီးရင် ဖယ်ရှားပြီး မျက်နှာကို ကောင်းစွာဆေးကြောပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်ကို အမြဲလိမ်းပေးပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထားရစ်ခဲ့သော အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို မြင်တွေ့နိုင်စေရန် နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သတိရပါ။
Antioxidant Mask ကို လောင်းပါ။
အရေပြားမှာ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေ လိုအပ်တာကြောင့်လို့ မှတ်ချက်ပေးဖူးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုအပ်သော antioxidants ပမာဏကိုပေးဆောင်သောအစားအစာများအားလုံးကိုသယ်ဆောင်သည့်မျက်နှာဖုံးများကိုလောင်းခြင်းနှင့်မတူပါ။. အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတော့ မှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေမှာတော့ မုန်လာဥနီနှစ်လုံးကို ရောစပ်ပြီး လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်နဲ့ ပျားရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းနဲ့ ရောမွှေသွားမယ်။ အရောအနှောအားလုံး တစ်သားတည်းကျပြီဆိုရင်တော့ မျက်လုံးပုံစံကို ပြန်လည်နုပျိုစေဖို့ အရေပြားနဲ့ အဲဒီနေရာကို လိမ်းပေးဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ ပြီးရင် ၁၅ မိနစ်လောက်စောင့်ပြီး ရေများများနဲ့ ဖယ်လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ရလဒ်တွေကို ပိုမိုအသက်ဝင်လာစေဖို့ သင်အကြိုက်ဆုံး moisturizer လိမ်းဖို့ မမေ့နိုင်ပါဘူး။
အလှအပအတွက်ရော အကြိုက်ဆုံးဟင်းပွဲအတွက်ရော သူ့မှာပါတဲ့ အာဟာရပမာဏကြောင့် အမြဲရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ်၊ သင့်မျက်လုံးပုံစံ ပြန်လည်နုပျိုမှုကို မဆုံးရှုံးချင်တော့ဘူး။ ဒါဆိုရင် ကောင်းကောင်းမှည့်နေတဲ့ ထောပတ်သီးတစ်ဝက်လိုတယ်။. မွှေထားသော ကြက်ဥအနှစ်နှင့် Rosehip oil ဖြစ်နိုင်သော အဆီနှစ်စက်တို့နှင့်အတူ ရောမွှေထားပါမည်။ အရောအနှောကို ကောင်းစွာပြုလုပ်ပြီးပါက ကုသမည့်နေရာကို သုတ်လိမ်းပြီး မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပြီး ရေဖြင့် ထပ်မံဖယ်ရှားပါ။ သံသယမရှိဘဲ၊ အရေပြားသည် ၎င်းကိုပေးသော ဗီတာမင်နှင့် ရေဓာတ်အားလုံးကို စုဆောင်းပေးလိမ့်မည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်ငါတို့ပြောနိုင်တယ် သဘာဝဒိန်ချဉ်သည် အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို ပိုမိုတောက်ပစေသည့်အပြင် ဝက်ခြံများကိုလည်း တိုက်ဖျက်ပေးပါသည်။. ဒါကြောင့် ကြယ်ပဲပါဝင်ပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ရှားစောင်းလက်ပတ် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်ပါမယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေဓာတ်သည် ဤပါဝင်ပစ္စည်းတွင် ရှိနေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေကို ပိုမိုကျန်းမာစေပြီး ချောမွေ့ချောမွေ့စေမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် မျက်နှာဖုံးအနေနဲ့ လိမ်းပြီး 25 မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးမှ အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီမှာ လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း ရေနဲ့ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သင့်အသားအရေသည် အလွန်နူးညံ့နေမည်ဖြစ်သော်လည်း ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး သခွားသီးအချပ်အနည်းငယ်ဖြင့် သင့်မျက်လုံးထဲတွင် အနားယူနေပါက ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သင်ပိုမိုသတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » မျက်လုံးကို နုပျိုစေသော မျက်နှာဖုံးများ
မင်းရဲ့ဝါသနာကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ စဉ်းစားဖူးလား။